I-china Dongshen professional flat top synthetic hair makeup foundation brush Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
I-Dongshen professional flat top synthetic hair makeup brush ibhulashi
I-Flat Top Foundation Brush - Sebenzisa Imikhiqizo ye-Liquid, Cream noma Powder ngokungazami nangokungenaphutha.
Masemoyeni Ngokhuni noma enye into ngokuya ngezidingo zamakhasimende
Inkokhelo T / T, PayPal, Western, njll.
● I-Dongshen I-Foundation Brush: Leli ibhulashi lesisekelo elihle kunazo zonke elithambile ukuthinta futhi lifake isisekelo ebusweni bakho, linobungane besikhumba, Alimunci futhi lilahle imikhiqizo futhi lisebenzisa isisekelo ngokushelela nangokulingana.
● Ama-Bristles aminyene, aqinile, nathambile: Le Flat Kabuki Foundation Brush yenziwa ngezinwele zokwenziwa zobuningi, ithambile kakhulu kodwa iqinile ngokwanele, imboza kalula amabala amancanyana, amabala ngisho nezinduna ezinezinhlobo eziningi zezisekelo zokumboza ezigcwele.
● Ukusetshenziswa okuningi: Ibhulashi alishiyi imigqa yokuphulula. Ukwenza okuhle okungenaphutha kwempuphu, uketshezi, ukufihla, ukhilimu, amahloni, ukufihla, izimonyo zesisekelo. kudingeka inani elincane kuphela lesisekelo kwibhulashi ukuthola imiphumela emihle, ukusetshenziswaI-Dongshen shayela ukudala ukumbozwa okungokwemvelo nokungapheli.
● I-Professional Design And Material: I-100% engenazisi futhi ayihloliwe ezilwaneni, konke I-Dongshen amabhulashi wezimonyo enza inqubo yesinyathelo esingu-80 ngenkathi kwenziwa ukuvimbela ukuchitheka, izinto zethu zonke zinikeza umuzwa oyingqayizivele, onethezekile.
● Isiqinisekiso sekhwalithi ephezulu: I-makeup ephelele nge I-Dongshen ibhulashi lesisekelo, kanye nensizakalo enhle yokusekela, isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esingu-100% uma unemibuzo. Amakhasimende nguNkulunkulu wethu, sifuna ukuthatha konke okusemandleni ethu nonke.
● Izinwele zokwenziwa ngokwemvelo: Sizinwele ezivame futhi ezintekenteke, ama-bristles aphezulu kakhulu. Senobungane futhi ethambile, ngisho nokwenza izimonyo. No amamaki okuxubha, akunampuphu. Izinto zokusetshenziswa zingeniswa kusuka kumkhiqizo we-BASF waseJalimane.
Ukugcinwa njalo - Ngemuva kokuhlanza, cindezela ngobumnene ama-bristles ngethawula lephepha noma ikotini ukotini ukuze ususe ngokushesha umswakama bese ulengisa ibhulashi lokwenza izimonyo ukuze livumele ukuthi lome ngokwemvelo. Khumbula ukungasonti izihlakala noma ukusebenzisa okomisa izinwele (umoya oshisayo) ukomisa ibhulashi lokwenza izimonyo.
Njengomphakeli wakho omethembayo, sihlala sinikezela ngemikhiqizo yekhwalithi eyi-100% kanye nesevisi yamakhasimende. Uma ungajabule ngomkhiqizo owutholile zingakapheli izinsuku ezingama-30, sicela uxhumane nathi ukuze uthole impendulo ngokushesha. Ngaso sonke isikhathi senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende ethu ajabule ngokuthenga okuvela kithi.
Langaphambilini I-Dongshen soft skin-friendly zokwenziwa zezinwele isibambo sokhuni sebhulashi lesisekelo se-concave
Olandelayo: I-Dongshen high quality isibambo esimhlophe sokhuni sokwenziwa kwezinwele zokwenziwa kwesisekelo
Flat Phezulu Kabuki Hexagon High-ukuminyana Multi-func ...
Ukushefa Setha, Ukugunda Izinwele, Setha i-Makeup Brushes, Yenza amabhulashi, isethi yokwenza ibhulashi, Ithuluzi Brushes Brushes,